Arahaba Feno 50 Taona i Rana, Masud Rana, Ilay James Bond-n’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2016 5:30 GMT
Peta-drindrina mampiseho ny fahadimam-polo taonan'ny andian-tantara an'i Masud Rana. Sary tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'i Sheba Prokashoni (Tonian-dahatsoratry ny andiam-bokin'i Masud Rana).
Lehiben'ny tafika taloha izay miasa ao amin'ny sampan-draharahan'ny fitsikilovana ao amin'ny fireneny ankehitriny. Lehilahy namita iraka miafina eran'izao tontolo izao, ary fantatra amin'ny anarana fohy sy mora tadidy. Mahafatifaty sy tia vehivavy tsy mety hanaiky ho sasatra.
Mampahatsiaro anareo zavatra ve izany? Tsy isalasalana , nefa tsy i James Bond no resahana eto fa i Masud Rana , antsoina amin'ny anarambositra hoe MR-9, mpitsikilo malaza indrindra amin'ireo vitsy amin'ny haisoratra Bengali, feno 50 izy amin'ity volana May 2016 ity.
Qazi Anwar Hussain, mpamorona sy mpanoratra ny andian-tantara Masud Rana. Sary avy amin'i Humayra Ahmed via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Niseho voalohany tamin'ny 1966 tao amin'ny tantara mitondra ny lohateny hoe ‘Dhwangsha Pahar’ (Ilay tendrombohitry ny Fandravana) ity mpitsikilo miavaka ao Bangladesh izay famoronan'ilay mpanoratra malaza Kazi Anwar Hussain ity. Hahita fitoviana maro eo amin'i Rana sy i James Bond ny mpamaky . Raha ny marina, dia fantatry mpankafy azy ampitiavana hoe James Bond Bengali izy.
Efa lava ny lalana vitan'i Rana teo amin'ny tontolon'ny ny tantara foronina fitsikilovana ao Bangladesh, ary olona manan-tantara ara-kolotsaina izy tamin'ny taona 1970s sy 80s. Mpandray anjara fototra tamin'ny tantara efa ho 400 mahery hatreto.
Voalaza fa nangala-tahaka tantara avy tamin'ny tantaram-pitsikilovana tandrefana malaza tamin'ny fomba malalaka i Hussain tamin'ny fiandohan'ny andian-tantaran'i Masud Rana, saingy nandritra izany fotoana izany nifanandrify tamin'ny zavatra nilain'ny tanora miteny Bengali izany, izay tsy nanana fialamboly hafa talohan'ny nisian'ny lalao video, ny fahitalavitra, ny boky tandrefana ary ny aterineto.
Namboarina ho azo lalaovina amin'ny sarimihetsika sy ny tantara amin'ny fahitalavitra tao Bangladesh ilay mpilalao sy ny tantara maro.
Lasa malaza i Masud Rana rehefa mamaky ity fanehoan-kevitr‘i Tasdik Aurangazeb ity ao amin'ny Facebook :
Tsy nanana vola be holaniana aho tamin'izany fotoana izany ka na ny mividy boky aza dia sarotra ho ahy; tsy afaka hazavaina amin'ny teny vitsivitsy ny halehiben'izany fahasarotana izany. Nandingana sakafo hatrany aho ahafahako mividy ny bokin'i Masud Rana. Nandeha an-tongotra an-kilaometatra maro koa aho mba hanangonako vola amin'ny tsy fandehanana posy. Ah, tena nahafinaritra izany fotoana izany! Feno fahatsiarovana mamy mangidy.
Tanora ny ankamaroan'ny mpamaky ny tantaran'i Masud Rana ,betsaka ihany koa anefa ireo olon-dehibe mpamaky no voasarika tamin'izany. Nanoratra i Morshed Alam Badol hoe :
Mbola manintona ahy hatrany ny tantaran'i Masud Rana nanomboka izaho mbola tanora ka lasa zatovo, hatramin'izaho zatovo ka lasa olondehibe. Tahaka ny hoe niverina tany amin'ny sekoly ambony izy.
Manoritsoritra ny fiantraikan'ny tantaran'i Masud Rana teo amin'ny mpamaky Bangladeshi ny fanehoan-kevitr‘i Raat-Prohori :
Tsapako ho tsy te hijanona mihitsy aho amin'ny maha mpamaky efa hatry ny ela ahy ny tantaran'i Masud Rana. Na teo amin'ny birao fandraisana olona amin'ny trano fandraisam-bahiny kintana dimy izany, na tamin'ny fotoana naha-kapitenin-tsambo mihaja na raha mpanamory fiaramanidina, dia mety ho tsy sahirana aho hizatra amin'ny anjara asako. Atoa Kazi Anwar Hussain no nampianatra ahy hampiasa basy, hitsambikina avy eny amin'ny fiaramanidina amin'ny elon'aina, hanao ankisitrika anaty rano, ary tamin'ny alàlan'i Masud Rana no nampianarana ahy izany rehetra izany.
Nivoaka ny boky vaovao sy gazety ho fanomezam-boninahitra ny fahadimampolo taonan'i Masud Rana. Sary tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'i Sheba Prokashoni (Tonian-dahatsoratry ny andian-tantaran'i Masud Rana ).
Na izany aza, tsy ny fianakaviana rehetra ao Bangladesh no mampiantrano an'i Masud Rana. Nahazo tsikera noho ny votoaty miresaka firaisana ara-nofo miharihary tamin'ny boky sasany ilay andian-tantara. Any amin'ny sehatra sasany, lasa ratsy laza ny tanora mpamaky ny andian-tantara noho izany antony izany.
Nefa tsy kivy sy tsy nijanona nankalaza ilay andian-tantara ny mpankasitraka an'i Masud Rana. Ao amin'ny pejy Facebook Masud Rana, mampahatsiahy ny famakiana ny boky ny olona. Mahatsiahy i Sottom Haldar hoe:
Fantatro fa tsy mamaky ny tantaran'i Masud Rana ny tanora taranaka amin'izao fotoana izao , Aleon'izy ireo [ny tantara foronin'ny mpanoratra Amerikana ] Sidney Sheldon na Robert Ludlum. Fantatro fa ho arian'izy ireo fotsiny ho sokajy ambany ny bokin'i Masud Rana. Kanefa ho an'ny zanaky ny taompolo 90s [ao Bangladesh] tahaka ahy, dia tantara mandia laza izany Rana sy Kazi Anwar Hussain izany. Manana adidy aminy aho satria nampiseho izao tontolo izao tamiko tamin'ny alalan'ny boky izy ireo.